दसैँको मासुसित महँगो रक्सीको चुस्की लिँदै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस्, शरीरका अंगमा हुने हानी – Health Post Nepal
दसैँको मासुसित महँगो रक्सीको चुस्की लिँदै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस्, शरीरका अंगमा हुने हानी
२०७८ असोज २४ गते १२:४६
तपाईंले पत्रपत्रिका तथा लेखमा कतिपटक पढ्नुभएको पनि होला, सीमित मात्राको अल्कोहल स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । र, कैयौँपटक यो पनि पढ्नुभएको होला, अल्कोह कत्ति पनि पिउनुहुँदैन । यस्तोमा तपाईं भ्रमको स्थितिमा हुन सक्नुहुन्छ कि, सीमित मात्रामा अल्कोहल स्वास्थ्यका लागि नोक्सानदायक छ कि फाइदाजनक । चिकित्सकका अनुसार यदि तपाईं दैनिक एक लार्ज पेग वा दुई स्मल पेग (६० एमएल) अल्कोहल पिउनुहुन्छ भने त्यसको ठूलो असर तपाईंको कलेजो (लभर) र स्वास्थ्यमा परिरहेको हुन्छ ।
रक्सीको लिभरमा प्रभाव
हाम्रो शरीरभित्र जाने तरलपदार्थको प्रोसेसिङ लिभरले गर्छ । रक्सी जब तपाईंको शरीरमा पुग्छ, लिभरले त्यसको प्रोसेसिङ सुरु गर्छ । तर, लिभरले एकपटकमा धेरै मात्रामा रक्सीको प्रोसेसिङ गर्न सक्दैन, किनकि यसको आकार सानो छ । तसर्थ, जब तपाईं धेरै रक्सी पिउनुहुन्छ, तब लिभर यसलाई प्रोसेसिङका लागि स्टोर गर्न असमर्थ हुन्छ, फलस्वरूप तपाईंले पिएको रक्सी पेट र सानो आँत हुँदै तपाईंको रगतमा घुल्न थाल्छ । यो रगत शरीरका अन्य अंगमा पुग्नुअघि पहिले लिभरमा फिल्टर हुनका लागि पुग्दछ ।
रगतमा घुलेको यो रक्सीले एउटा खास प्रकारको इन्जाइम बनाउन थाल्छ, एसिडएल्डिहाइड भनिन्छ । यो इन्जाइमले तपाईंको लिभरलाई नोक्सान पुर्याउँछ । लामो समयसम्म अधिक मात्रामा रक्सी पिउने व्यक्तिको लिभर बिस्तारै–बिस्तारै खराब हुँदै जान्छ । लिभरले यदि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म काम गर्न बन्द गरिदियो भने व्यक्तिको जीवन मुस्किल हुन्छ र उसलाई अनेककिसिमका गम्भीर रोग लाग्न थाल्छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार लिभरका लागि रक्सीको मात्राले खास अर्थ राख्दैन, कमसे कम मात्राले पनि तपाईंको लिभरलाई प्रभावित बनाउँछ नै । यदि तपाईं थोरै मात्रामा रक्सी पिउनुहुन्छ भने त्यसको प्रभाव तपाईंको लिभरमा लामो समयमा देखिन्छ, जब कि ज्यादा मात्रामा पिउनुहुन्छ भने प्रभाव छिटो देखिन्छ । यसको अर्थ जति नै मात्रामा पिए पनि रक्सीले लिभरलाई ढिलो–चाँडो प्रभावित बनाउँछ नै ।
रक्सी पिउनाले कति समयमा खराब हुन सक्छ लिभर ?
सामान्यतया देखिएको छ कि, यदि तपाईं रक्सी सेवन गर्नुहुन्न भने पनि आजकल खानपानमा मिलावट, चिल्लोपदार्थको अत्यधिक सेवन तथा केमिकलयुक्त आहारको सेवनका कारण तपाईंको लिभर प्रभावित भइरहेको हुन्छ । तर, जब तपाईं रक्सी पिउन सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईंको लिभर बिस्तारै–बिस्तारै विभिन्न चरणमा खराब हुँदै जान्छ । जस्तै,
यदि तपाईं सातामा ४ दिन ९० एमएल (डेढ ठूलो पेग) भन्दा बढी रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ भने तपाईं हेभी ड्रिंकर मानिनुहुन्छ । हेभी ड्रिंक गर्ने व्यक्तिमा सबैभन्दा पहिले लिभरवरिपरि फ्याट जम्न सुरु हुन्छ, जसका कारण फ्याटी लिभरको समस्या हुन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले यस अवस्थामा रक्सी पिउन छोडिदियो भने उसको लिभर पछि गएर पुनः ठिक अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ ।
तेस्रो तथा अन्तिम स्टेजमा व्यक्ति लिभर सिरोसिसको सिकार हुन्छ । लिभर सिरोसिसको अर्थ लिभर जुन कोषहरूबाट बनेको हुन्छ, ती कोष मृत हुन्छन् र लिभरलाई काम गर्नमा विभिन्न समस्या आउँछन् । धेरैजसो केसमा १० वर्षसम्म हेभी ड्रिंक गर्ने व्यक्तिमा लिभर सिरोसिस भएको पाइएको छ । एकपटक लिभर सिरोसिस भइसकेपछि व्यक्तिको लिभर ठिक अवस्थामाभ ल्याउन सकिँदैन । यो अवस्था आइपुगेपछि व्यक्तिको मृत्यु निश्चित हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा व्यक्तिमा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस हुन पुग्छ । यो चरणमा पनि यदि व्यक्तिले लगातार रक्सीको सेवन गरिरहन्छ भने उसको लिभर सुन्निन थाल्छ र लिभर ड्यामेज हुन सुरु हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस बढ्नाले व्यक्तिको स्वास्थ्य घातकस्तरसम्म खराब हुन सक्छ । यद्यपि, यस चरणमा पनि रक्सी पिउन पूर्णतः छोडिदिएको खण्डमा व्यक्तिको लिभरलाई धेरै नोक्सान पुग्न पाउँदैन र ऊ लामो जिन्दगी बाँच्न सक्छ ।
तेस्रो तथा अन्तिम स्टेज
रक्सीले लिभरमा मात्र होइन, अन्य अंगमा पनि प्रभाव
यदि तपाईं दैनिक एक लार्ज पेग रक्सी पिउनुहुन्छ भने तपाईंमा लिभर खराब हुने मात्र होइन, अन्य धेरै खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्छन् । यीमध्ये प्याक्रियाटाइटिस, डिप्रेसन तथा चिन्ता, प्रजनन क्षमतामा कमी, उच्च रक्तचाप, मुख तथा लिभरको क्यान्सर, मोटोपन, नर्भ ड्यामेज, स्ट्रोकलगायत रोग प्रमुख हुन् ।
के दैनिक एक पेग रक्सी सुरक्षित छ ?
विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार लिभरका लागि रक्सीको मात्राले खास अर्थ राख्दैन, रक्सीको कमसे कम मात्राले पनि तपाईंको लिभरलाई प्रभावित बनाउँछ नै । यदि तपाईं थोरै मात्रामा रक्सी पिउनुहुन्छ भने त्यसको प्रभाव तपाईंको लिभरमा लामो समयमा देखिन्छ, जबकि ज्यादा मात्रामा पिउनुहुन्छ भने प्रभाव छिटो देखिन्छ । यसको अर्थ जति नै मात्रामा पिए पनि तपाईंले पिएको रक्सीले तपाईंको लिभरलाई ढिलो–चाँडो प्रभावित बनाउँछ नै । सत्य यो हो कि– यदि तपाईं स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले अल्कोलहको सेवन बिल्कुलै गर्नुहुँदैन । यद्यपि, यदि तपाईं अकेजनल्ली (कुनै खास मौकामा मात्र, वर्षमा ५–६ पटक १–२ सानो पेग) पिउनुहुन्छ भने त्यसको प्रभाव शरीरमा देखिँदैन । तर, यदि तपाईंमा पहिलेदेखि नै लिभरसम्बन्धी कुनै रोग छ भने खास मौकामा मात्र पिएको थोरै मात्राको रक्सी पनि तपाईंका लागि खतरनाक हुन सक्छ ।